अमेरिकामा खोपको परीक्षण सुरु, ट्रम्पले भने, आशाजनक सुरुवात - Jhilko
कोरोना भाइरसले संसारका धेरैजसो देशलाई आफ्नो चपेटामा लिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण आजसम्म सात हजार एक सय ५८ जनाको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ र भाइरसबाड एक लाख ८० हजार संक्रमित भइसकेका छन् । स्थिति गम्भीर मान्दै डब्लुएचओले महामारी घोषित गरिसकेको छ । अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ६० भन्दा बढीको निधन भइसकेको छ ।
अमेरिकाले कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि खोपको परीक्षण सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसको प्रशंशा गर्दै यो विश्वमै छोटो समयमा विकसित भएको खोप हो । उनले भनेका छन्, यो आशाजनक सुरुवात हो ।
यो परीक्षणका अनुसन्धानका प्रमुख डा. जैक्सनले बताए, कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ । यसमा परीक्षणका लागि ४५ जना व्यक्तिको चयन गरिएको छ । तिनीहरुमा अलगअलग मात्रामा खोप दिइनेछ । अहिले यसको दुस्प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिदैंछ ।
कोरोना भाइरसको आतंकले सताइरहेको बेलामा केही व्यक्तिहरु मान्छे कसरी बचाउने भन्दै लागिरहेका छन् । खोपको परीक्षणमा सामेल ४३ वर्षीय महिला जेनिफर हैलरले भनिन, हामी सबै असहाय महसुस गरिरहेका छौं । यदि यसबाट सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ भने हाम्रो लागि सौभाग्य हो । यो खोपको कोड नाम एमआएनए १२७३ ।
खोपका लागि १८ वर्षदेखि ५५ वर्षको उमेरका मान्छेको चयन भएको छ । यी सबैलाई परीक्षण गर्ने वित्तिकै उनीहरुको रगतको नमूना लिइएको छ । यसबाट कुनै साइड इफेक्ट त भएको छैन भनेर हेरिदैंछ । यो खोप सफल भएमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाइदिनेछ । एजेन्सीको सहयोगमा
सुनचाँदीको भाउ एक सातामै ७ हजार बढी सस्तो
अमेरिकाको टेक्सासमा अन्धधुन्द गोली चलाउँदा कम्तीमा ५को...
अमेरिकाको टेक्सासमा एक बन्दुकधारीले अन्धधुन्ध गोली चलाउँदा भएको घटनामा कम्तीमा ५...
पृथ्वीमा पानी कहाँबाट आयो ?
धार्मिक कथा अनुसार ब्रम्हाले भगिरथलाई ल लैजा गंगा भनेर दिएर भन्दा महादेवले ंगंगाको...
'डब्लूएचओ' को टोली उदयपुरमा
उक्त टोलीले सङ्क्रमित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरि अवको रणनीतिको बारेमा कोरोना...